Ahlusunna oo Amaro iyo digniino ku soo rogtay shacabka magaalada Dhuusomareeb – Somali Top News
Ahlusunna oo Amaro iyo digniino ku soo rogtay shacabka magaalada Dhuusomareeb
Talisyada Booliska Iyo Nabadsugida heer Federaal qeybaha ka howlgala Galmudug Fadhigooduna yahay Caasimadda Galmudug Ee Dhuusamareeb kulamo Amniga ku saabsan kadib waxay wada jir u soo Saareen Awaamir & digniin ku socota Shacabka kala duwan ee ku nool Magalada Dhuusamareeb.
Awaamiirta ay soo saareen ayaa ka kooban 10 qodob kuwaas oo dhamaantood la farayo dadka ku nool Caasimnadda Galmudug ee Dhuusamareb,waxaana ay kala yihiin.
2: Qofka leh Gaadiidka waa in uu Gaarigiisa ku xiraa Taargada Maamulka lamana ogolaan doono Gaari aan laheyn Taargo Aqoonsiga Uu Gaariga ku shaqeeyo.
Amarkaan kasoo baxay hay’adaha Amniga Soomaaliya ee ku socda Shacabka Magalada dhuusamareeb ayaa u muuqda in Amniga Magaladaas si toos ah loogu wareejiyay Hay’adaha Amniga Dowladda Federaalka Soomaaliya.
← FBI-da Mareykanka oo xabsiga dhigtay wiilal Soomaaliyeed
2 refugees from Somalia arrested in Tucson, accused of providing support to ISIS →
Ciidan Itoobiyaan ah oo labaxay Mukhtar roobow
Faah-faahin: Qarax saakay ka dhacay gobalka Shabeelaha Hoose